Kedu ihe ị ga-atụ anya n'aka ụlọ ọrụ SEO m chọrọ ịnya?
Mgbe ọ bụla, onye ọ bụla nwere ike ịmepụta ihe n'ịntanetị ọ bụla nwere ike ịda mbà na ọganihu dị nro, ma na-eche mkpa ọ dị inwe mmelite dị ukwuu na ntanetị iji nweta ndị ahịa. Ee, na-agba ọsọ Nchọpụta Nyocha Mmasị na nchụso onwe onye nwere ike ịghọ ngwọta kachasị mma iji tinye ọrụ azụmahịa ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị, mgbe ọ bụla onye nwe ụlọ ahịa nwere ọtụtụ ihe ọ ga-eme, yana ọtụtụ ihe ga-echegbu onwe ya. Ya mere, ịga ịchọta onye nkwekọrịta yiri ka ọ bụ ezi echiche.
Ma ihe ị ga - atụ anya n'aka ụlọ ọrụ SEO anyị kpebiela ịkwụ ụgwọ, dịka ọmụmaatụ na pọtụfoli dị egwu? Ka anyị chee ya ihu - ha niile, ma eleghị anya dị ka onye ọ bụla ọzọ na-ahụ maka ọrụ, ga-eme ka obi sie gị ike na ha ga-enwe ọganihu azụmahịa gị, kọọrọ gị aha ha a ma ama, ọkachamara dị elu na nghọta miri emi nke ọ bụla, ọbụna nke kachasị, akụkụ nke Ngini Nchọnchọ Njikarịcha dị ka njikwa kachasị mma, ntanetị n'ịntanetị, mmepe weebụ, mmeghachi omume na-agbanwe agbanwe, atụmatụ ọdịnaya, mgbasa ozi ọha na eze, na na. Ma olee ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na SEO ụlọ ọrụ, nke naanị kwere nkwa ime ihe niile ahụ nke ọma, ma e wezụga na ezi ezi ego?
Nke a bụ aro ụfọdụ gbasara ihe ndị anyị nwere ike ịtụ anya mgbe ọ bụla site na SEO ụlọ ọrụ mgbe ịmechara nkwa ịgba ụgwọ. Ya mere, tụlee ihe ndị a iji mee ka ndị mmadụ nwee ego ma gbadaa ahịa.
Ozugbo ị họọrọ ụlọ ọrụ SEO ịrụ ọrụ na oru gị, ị ga-enwe nzukọ mmeghe. O nwere ike ịbụ nnọkọ nzuzo na nnọkọ ogbako, mkparịta ụka site na ekwentị, ma ọ bụ mkpirikpi mkparịta ụka site na vidio. Ka o sina dị, e nwere ajụjụ ụfọdụ dị mkpa nke a ga-aza tupu gị emesịa banye nkwekọrịta. Ọ ga-aka mma ịkwadebe ndepụta ajụjụ n'ọdịnihu. M nwere ike ịmalite ịmalite site na isi ihe na-esonụ:.
Rịọ maka amaokwu ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ọmụmụ gbasara gị iji chọpụta ma chee echiche ntakịrị oge. Echere m ebe a ka ọkachamara nyocha njirimara na kwesịrị ekwesị ga-adị njikere igosi gị ụfọdụ ụzọ dị iche iche pụrụ iche ma ọ bụ omume ọ bụla iji mee atụmatụ SEO nke ọma.
Rịọ maka atụmatụ oge maka azụmahịa gị iji chee ihe ịrịba ama mbụ nke ọganihu ahụ. Rịba ama, ị ghaghị ịkpachapụ anya ma ọbụnakwa na-enyo enyo ebe a. Ụlọ ọrụ SEO kwesịrị inye gị oge etinyere ya, dị ka nsonaazụ ya gara aga. Ọ dịghị mgbe ọ ga-ekwe gị nkwa ọganihu ọ bụla na ụbọchị ma ọ bụ izu.
Mee ka ihe niile doo anya ọzọ, egbula oge ịzaghachi ajụjụ gị ugboro ole ha bụ ọkachamara na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ. Ọzọkwa, rịọ ma ọ bụrụ na enwere ahụmahụ mbụ ọ bụla na isiokwu gị ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ otu niche ahịa dị mkpa.
Mara ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ SEO na-elekwasị anya na akụkụ ọ bụla nke Nchọpụta Nchọpụta Mmasị, ma ọ bụ nwere ike ịrụ ọrụ na ahịa dijitalụ n'ụzọ sara mbara. Mee nke a, jụọ mmadụ ole na ole ọkachamara n'ịzụ ahịa ga-arụ ọrụ gị.
Jide n'aka na ị ga-abịa nzukọ mmeghe na ndepụta nke okwu dị otú ahụ iji tụlee ma mee ka ihe niile doo anya. Enweghi ike ịkọwa izugbe niile, nakwa yana arụmụka kachasị nke ndị ahịa na-ere ahịa nyere gị. Naanị jiri ha tụnyere ndị a na-akpọ ndị nnọchiteanya SEO. N'eziokwu, ihe nwere ike ịgha ụgha ebe a, n'ihi ya, ọ ga-akara gị mma ka ị nwee obi abụọ.
Ka mkparịta ụka gị na ndị nnọchianya na-abịa na njedebe, ị gaghị eche ọbụna ikuku kachasị mma nke obi nkoropụ, karịsịa na isi isiokwu dịka oge ịgba ụgwọ, oge oge, na usoro izugbe nke ọchụchọ ahụ njikarịcha.
Sebu SEO Audit
Ihe mbụ nke ụlọ ọrụ SEO na-agba ọsọ mbụ maka ebe nrụọrụ weebụ gị.Ọtụtụ mgbe, a pụrụ iji usoro a tụnyere ịchọta na ị ga-achọpụta usoro nlekọta ahụike SEO gị.
E wezụga ogo ogo na nhụsianya nke ụlọ ọrụ ahụ, usoro ịgbaghari maka SEO Audit ga-ekpebisi ike site na mgbagwoju ogugu gị, nakwa yana oke na ibe nke ibe weebụ gị.N'ileba anya na ntinye mbụ, ị ga-atụ anya ụlọ ọrụ SEO maka ihe ndị a:
A ga-arịọ gị ka ị nweta ohere na akaụntụ Google Analytics. N'iji ngwaọrụ ndị ọkachamara dị iche iche na nkwekọ ziri ezi, ndị ọkachamara ga-achọ ohere dị oke na ntanetị gị na akụkọ weebụ.
Ụlọ ọrụ SEO nwere ike ị rịọ maka kọntaktị kọntaktị na onye si na otu gị, onye ga-elekọta maka SEO iji na-ahazi akaụntụ gị ozugbo. Rịba ama, mkparịta ụka a na-enwekwu mmekọrịta, nke ka mma. Ekwuru m na ọ ga-aka mma ka ị kwenye na ịnweta oku maka nkwenye maka mmemme ọ bụla, kama ọ bụ naanị ịkekọrịta nsonye maka aro.
Mkparịta ụka mgbe niile
ụlọ ọrụ SEO agaghị enye gị ihe dịka "ime DIST", dị ka inwe nyochaa njikarịcha nyochaa na nke a pụrụ ịtụkwasị obi pụtara nanị nkwurịta okwu mgbe niile, ntinye ego, na nkwurịta okwu ọzọ na nchọpụta dị oke. I mee nke a, ị ga-ama mgbe niile ihe ọma na-aga, n'ihi na ị ga-arụkọ ọrụ ọnụ ka ga-abụ naanị ntụgharị ma doo anya.
I kwesiri ịtụ anya na ụlọ ọrụ SEO ga-enye gị onye njikwa akaụntụ onwe gị iji mee ka ị kwadoo na ihe ọ bụla na-ezighị ezi ma ọ bụ na-enyo enyo na-eme n'ime oge niile nke nkwekọrịta gị. N'ụzọ ahụ, otu a ga-enwe ike ịrụ ọrụ na nhazi nsogbu na idozi nsogbu ọ bụla.
Ị ga-amara na ị meela nhọrọ ziri ezi na ọkwa mkpirikpi. Kwa ụbọchị, ndị ọrụ kwesịrị ịdị njikere na njikere ịnye gị nkwurịta okwu doro anya banyere usoro ọ bụla na atụmatụ ọ bụla metụrụla, ma ọ bụ tụlere maka njikarịcha nchọgharị gị.N'ụzọ dị otú ahụ, ị ​​ga-enwe nkwurịta okwu na nkwado na-aga n'ihu na nkwado zuru ezu maka ọganihu azụmahịa gị. A sị ka e kwuwe, ọ bụ naanị ihe fọdụrụ gị ka ị cheta - ozi zuru ụwa ọnụ nke SEO ụlọ ọrụ bụ iji oké ibu SEO pụọ n'ubu gị ka i wee nweere onwe gị ịbanye n'ime nsogbu azụmahịa siri ike, nke bụ mgbe niile echere nlebara anya nke onye nwe ya Source .